C++ - Page2- မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် » ..:: ကွန်ပျူတာနယ်ပယ် ::.. » Programming Languages - 1 » C Programming » ဆွေးနွေးချက်များ
22-01-2009, 08:32 PM
ပို့စ် 105 ခုအတွက် 420 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပြန်စာ - c++
အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်က ၃လ ပိုင်းမှသင်တန်းစတက်မလို့။အခုဝင်ကြည်လိုက်တာတော်တော်အားရှိ
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ heainhtunoo အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by heainhtunoo
26-01-2009, 11:32 PM
ပို့စ် 754 ခုအတွက် 2,430 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အခုလို С++ programming ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ ဆွေးနွေးတဲ့ ညီအစ်ကို မောင်နှမ အားလုံးနဲ့ သူငယ်ချင်းများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်...သူငယ်ချင်း bonge ပြောသလို Language တစ်ခုကိုပိုင်နိုင်အောင်လေ့လာနိုင်ပါစေဗျာ..တကယ့် ကို Basic ကနေလေ့လာနေတဲ့သူတွေ အတွက်ဆိုရင် ကျွန်တော် မေးခွန်းလေးတွေပေးပါရစေ...မေးခွန်းလို့ ပြောလို့ တွက်စာတွေမဟုတ်ပါဘူး... စာတွေလဲဖတ်ထားတယ်ဆိုရင်ပေါ့ သိနေတဲ့ သူတွေအတွက်တော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်..စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူတွေ အတွက်တကယ့် ကို Basic ကနေလေ့လာနေသူတွေအတွက်ပါ...ကျွန်တော် Title လေးတွေနဲ့ အရင်ပေးထားပါမယ်...Title ၁ ခုမှာ မေးခွန်း ၄ ခု (or) ၅ ခုလောက်ပါတယ်...
1)The basics of C++
10)C++ File I/O
13)Inline Functions in C++
14)Accepting Command-Line Arguments
အားလုံး အဆင်ပြေပြေနဲ့ လေ့လာနိုင်ကြပါစေ......ပြီးရင်တော့ မေးခွန်းတွေ ဖြေရမှာနော်...
Last edited by မိုးလွင်; 26-01-2009 at 11:34 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ မိုးလွင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by မိုးလွင်
09-02-2009, 10:05 AM
tutu ရေ Password ကမရဘူးနော်။ www.myanmarfamily.org နဲ့ WWW.Myanmarfamily.Org မရဘူးနော်။ C++ စာအုပ်မှာ... တစ်ချက်ကြည့်ပေးလို့ရမလားမသိဘူးနော်...
Thida Tun ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by Thida Tun
Originally Posted by Thida Tun
C++ စာအုပ်တွေက အများကြီး။ ဘယ်စာအုပ်ကို ပြောတာလဲ။
အောက်ကလင့်ခ်က စာအုပ်တွေဆိုရင်တော့ password မမှားပါဘူး။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ tu tu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
bonge, Thida Tun
16-03-2009, 03:28 PM
ပို့စ် 14 ခုအတွက် 20 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Originally Posted by ကိုဦး
ဒီလင့်နှစ်ခုလုံး မှာ Downloads လုပ်လို့ ရပါတယ်..
ကျွန်တော် အထင် ရုရှားဘာသာနဲ့ ဆိုတော့ အခက်ခဲ ရှိနေတာဖြစ်မယ်....
ကျွန်တော် ဒီလင့်နဲ့ ပြန်တင်လိုက်ပါတယ်.....
ကျွန်တော်လဲ C ++ ကိုအခြေခံကနေ စပြီးလေ့လာခြင်ပါတယ်။ ifile link တွေကအလုပ်မလုပ်တော့ဘူးလားမသိဘူး download မရတော့ဘူး။ ကူညီကြပါအုံး။
Find More Posts by finger2finger
16-03-2009, 10:26 PM
ပို့စ် 600 ခုအတွက် 5,173 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Originally Posted by finger2finger
ဟုတ်ကဲ့ ခင်ဗျာ ... စိတ်ဝင်စားမူ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ ... ကျနော် အောက်မှာ ပြန်တင်ပေးထားပါတယ် ...
Teach Yourself C++ in 21 Days Second Edition
Last edited by bonge; 28-04-2010 at 09:46 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ bonge အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by bonge
17-03-2009, 01:01 AM
ကြိုက်ပြီဗျို.။ကျွန်တော်လဲ အသင်းသားအဖြစ်ဝင်လိုက်ပြီဗျာ။သိသလောက် ပို.ချပေးကြပါဦးဗျာ။အခုမှလေ.လာမှာမို.ပါ။ကူညီကြပါဦးဗျာ။
18-03-2009, 01:52 PM
ကျနော် notes က ဒီမှာ ( ကြီးကျယ်တာတော့ မဟုတ်ဘူးဗျ ... တစ်ချို့က လုပ်မယ် ပြောပြီး ဖြစ်အောင်မလုပ်ကျလို့ မပေးဘူးဗျ )
တကယ်လုပ်မယ် သူကို ကူညီရတာ အားရပါတယ်။ ကျနော် note 13 ထိဖတ်ပြီးရင် မရေးပါနဲ့အုန်း မ run ပါနဲ့ အုန်း ဒါလေး ကို ဆက်ဖတ်ပါ။ အစ်ကိုရေ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် i file နဲ. တင်ပေးပါလားဗျာ။အစ်ကိုပေးတဲ. လင်.က ၀င်လို.တော.ရပါတယ်။ဒေါင်းလုပ်မချတတ်လို.ပါ...
19-03-2009, 03:28 AM
ဟုတ်ကဲ့ ... ကျနော် လည်း ဒီပိုစ် မှာ ifile နဲ့ပဲ ပြန်တင်ပေးထားပါတယ် ခင်ဗျာ ... အဆင်မပြေရင် ပြေတဲ့ နည်းနဲ့ လုပ်ပေးပါမယ် ဗျာ ... ကျနော် တစ်ယောက်တော့ connection မကောင်းလို့ မေးလ် ကနေခွဲပြီး ပို့ပေးလိုက်တယ် reply မရဘူး ... ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေဖို့ ပဲ အရေးကြီးပါတယ် ဗျာ ... အဆင်မပြေရင်ပြောပေးပါ ... ပညာဒါန ပေါ့ဗျာ ...
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ bonge အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
hanhtun, Moe Lay, tu tu
20-03-2009, 06:04 AM
အဆင်ပြေသွားပါပြီဗျာ။ကျွန်တော်မျက်စိချမ်းပြီး မတွေ.မိတာပါ...အနှောက်ယှက်ဖြစ်သွားရင် တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ။
01-08-2009, 10:30 AM
ပို့စ်9ခုအတွက် 36 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကူညီပေးကြပါဦးဗျာ။ ကျွန်တော့်ဆီမှာ c++ နဲ.ပါတ်သတ်တဲ့ စာအုပ်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အင်္ဂလိပ် ဘာသာ ရော၊ မြန်မာ ဘာသာရောပေါ့ဗျာ။ ဘယ်စာအုပ်က စဖတ်ရမလဲမသိလို.ပါ.0level ကစပြီးလေ့လာချင်လို.။ အဲဒါ စာအုပ်နာမည်လေးတချက်လောက် ညွှန်းပေးကြပါဦး။ ဘာမှ ကိုမသိသေးတာပါဗျာ။ ကူညီပေးကြပါဦး ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Find More Posts by အပယ်ခံ
01-08-2009, 08:13 PM
Originally Posted by အပယ်ခံ
ကိုအပယ်ခံက ခုမှ C++ ကိုလေ့လာမယ်ဆိုတော့ ဆမိုင်းလေးနဲ့တူတူပဲ
ဆမိုင်းလေးလည်း C++ ကိုလေ့လာချင်နေတာပါ ကိုအပယ်ခံပြောသလို ဘယ်ကနေစပြီးတော့
လေ့လာရမလည်းမသိသေးလို့ ပြီးတော့ E-Books တွေကလည်း စုံစုံလင်လင်မရှိသေးဘူး
ကိုအပယ်ခံဆီမှာတော်တော်များများရှိတယ်ဆိုတော့ မြန်မာဖိုရမ်မှ ဆမိုင်းလေးတို့လို့ စပြီးလေ့
လာချင်နေတဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေအကျိုးရှိအောင် မျှဝေပေးစေချင်ပါတယ်ဗျာ ဘယ်ကနေစလေ့လာရ
မလည်းဆိုတာကိုတော့ ကို bonge အချိန်ရရင်ပြောပေးစေချင်ပါတယ် အားလုံး
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ စစ်တွေသားချေ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
02-08-2009, 10:11 PM
အပယ်ခံ နဲ့ Smilelay
ပြန်စာနောက်ကျသွားတာ စိတ်မရှိနဲ့ဗျို့ တရားစခန်းဝင်နေလို့ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ ကျနော်ရယ် ဖိုးကောက်လေးရယ် ဒီပိုစ် လေးမှာ ဆွေးနွေးအကြံပြုပေးထားတာလေးတွေ ရှိပါတယ်ဗျာ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦးဗျာ ။ အဆင်မပြေတာလေးတွေ ရှိရင်လည်း သိသလောက်မျှဝေပေးသွားပါမယ် ခင်ဗျာ
Last edited by bonge; 02-08-2009 at 10:12 PM..
Originally Posted by bonge
အခုလို ဆမိုင်းလေနဲ့ အပယ်ခံအတွက်လမ်းပြပေးတဲ့အတွက်
နှစ်ယောက်လုံးက အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခုမှလေ့လာရမယ်ဆိုတော့ မသိတာ
လေးတွေရှိရင် မေးလို့ရပါ့မလား? အချိန်ရရင်တော့ ဖြေပေးစေချင်ပါတယ် ကိုဘွင်း...
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ စစ်တွေသားချေ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
25-04-2010, 10:14 PM
ပို့စ် 79 ခုအတွက် 329 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကိုဘိုငယ် ... အောက်က လင့်ကမရတော့လို့ အချိန်ရရင် ပြန်တင်ပေးလို့ ရလား မသိဘူး ....
Teach Yourself C++ in 21 Days Second Edition ပါ .... ကျနော် အခုမှဖတ်မိလို့ C++ ကို အခုမှ စလေ့လာမလို့ ပါ .....ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ...
:28:Never look down on anybody useless you're helping them up.:28:
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ yawnathan အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Visit yawnathan's homepage!
Find More Posts by yawnathan
ဖိုရမ်၏ ပင်မအချိန်သည် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် +6.5 ဖြစ်သည်။ဒေသစံတော်ချိန် 08:10 AM